Mba hialana amin’ireo trano hazo izay mora mirehitra, izay mpitranga matetika, dia nanapa-kevitra ny Kaominina Antananarivo Renivohitra fa hosoloina ireo trano hazo, ary atao trano biriky, etsy amin'ny mpivarotra solomaso Andravoahangy. Miisa 153 ny isan'izy ireo, ary hatao mitovy avokoa ny trano fivarotana, ka ireo mpivarotra ihany no miantoka ny fananganana azy, fa ny Kaominina kosa no manara-maso ny fananganana ny foto-drafitrasa, ary manome toerana vonjimaika ho an'ireo mpivarotra. Nanomboka androany 18 martsa 2019 ny fandravana, ary haharitra iray volana eo ny asa. (Jereo Sary Tohiny)
Araky ny hitatsika amin'ny sary eto, ny faritra miloko mena dia mihinam-bary fa tsy mahavelon-tena ara-bary. Betsaka noho ny vary voleny ny vary hoaniny. Ireo faritra miloko mavo no manana ambim-bokatra omeny ireo faritra mena. 4 millions tonnes ny filan'ny Malagasy rehetra vary isan-taona. Tsy ampy 400 000 tonnes eo isan-taona. Izany hoe mihinam-bary 12 000 tonnes isan'andro izany isika. Lanintsika indray andro sy tapany izany ny vary mora 16 500 tonnes nafarana.
Amin'ny finoana Katolika, dia anisan'ireo Sakramenta 7 ny Fampihavanana izay singa iray ao anatiny ny Konfesy (Confession) Ireo Sakramenta Fito: - Ny Batemy (Baptême)- Ny Eokaristia (Eucharistie)- Ny Fankaherezana (Confirmation)- Ny Fampihavanana (Sacrement de réconciliation, appelé aussi sacrement de pénitence)- Ny Fanosorana ny marary (Onction des malades, appelée aussi sacrement des malades, anciennement extrême-onction)- Ny Fanambadiana Kristianina (Mariage)- Ny Filaharana (Ordination, fanamasinana Pretra sy Relijiozy) Ny Sakramentan'ny Fampihavanana izany, dia fandinihan-tena aloha, sy ny zavatra tsy nety rehetra natao, examen de conscience. Fieken-tena fa diso na teo anatrehan'ny tena, na teo amin'ny olon-kafa na teo amin'ny fiarahamonina.
Telo ny kandida nifaninana ho filohan’ny Oniversiten’i Mahajanga, dia i Pr Randrianirina Jean Baptiste, Pr Tiandaza Odilon ary Pr Rajaonarison Jean François. Pr Tiandaza Odilon no hitantana indray ny Oniversiten’i Mahajanga mandritra ny telo taona haharetan’ny taom-piasana. Miandry ny didim-panjakana raisina amin’ny filankevitry ny minisitra ny fanamafisana ny fahalaniany mialoha ny handraisany fahefana feno.
mardi, 12 mars 2019 07:07
Loholona Brigitte Rasamoelina: Nizara traikefa ho an’ny tanora
Nanatanteraka famelabelaran-kevitra sy fampianarana narahina fanontaniana ho an’ny tanora eo anivon’ny fikambanana FIFITAMA sy Kintan’ny Gasikara teny amin’ny Centre Universitaire Jésuite d’Ambohidempona Antananarivo II ny Loholona Brigitte Rasamoelina sy ireo mpiara-miasa aminy ny sabotsy 09 martsa 2019. « Tanora sy ny fitiavana manoloana ny finoana sy ny fanatontolona ary ny soatoavina malagasy », io ny lohahevitra niompanan’ny famelabelaran-kevitra noho ny fahatsapana fa manana andraikitra amin’ny fanabeazana maha olom-pirenena sy fitaizana ny tanora ny vehivavy mpanao politika.
lundi, 11 mars 2019 11:47
Sambava: Simbain'ny olona ny "barrière de corail"
Lasa akora amidy na ampiasan'ny olona amin'ny fanaovana lavapiringa ireto vatohara avy amin'io "barrière de corail" io, nefa anisany miaro ny trozona tsy ho fefika ary indrindra indrindra toeram-ponenan'ny karazana hazandro sy zava-maniry an-dranomasina aman'arivony, saingy jerem-potsiny. Raha potika anefa ny "récif corallien" dia ho maro ny zavamanaina sy zavamaniry an-dranomasina mety hanjavona sy ho lany tamingana. Hihena miandalana ny vokatra an-dranomasina rehefa potika ny vatohara ary dia ho very asa manaraka an'izay ireo mpanjono madinika. (Jereo Sary Tohiny)
Manatanteraka asa fitsaboana ao Antsirabe, ny 16 febroary ka hatramin’ny omaly 8 martsa ny Distrika 9220 ao amin’ny Rotary International. Marary 35.000 no notsaboina tamin’ny asa nataon’ny Rotary tao Antsirabe, ary mpitsabo 18 sy mpilatsaka an-tsitrapo 14 no nanatanteraka izany. Nihaona tamin’ny Praminisitra Ntsay Christian teny Mahazoarivo ny mpitarika ity vondrona ity niresaka ny sehatra hiaraha-miasa ho tohin’io asa tao Antsirabe io. Rehefa nijery ny toerana fitsaboana nify tao amin’ny hopitalin’Antsirabe mantsy ity vondrona ity dia nangataka fiaraha-miasa eo amin’ny lafiny fahasalamana, izay hiompana indrindra amin’ny fanatsaràna izany toerana izany, ka ny governemanta Malagasy no hiandraikitra ny fanavaozana ny trano, ary ny Rotary kosa no hanolotra fitaovana.
vendredi, 08 mars 2019 19:34
Sambava: Nampiantrano ny fankalazana rejionaly ny Andron'ny vehivavy taty SAVA
Notanterahina teto Sambava renivohitry ny Faritra SAVA ny fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy, ho an'ny Faritra SAVA, izay nosantarina tamin'ny diabe (carnaval) namakivavy ny tanàna niazo ny kianja Monisipaly. ''Zo sy andraikitry ny vehivavy amin'ny fampandrosoana", io no nahindrahindra nandritra ny fandraisam-pitenena. Raha ny aty SAVA manokana dia efa misy ny ezaka kely vita toy ny fanaovana trano fidiovana manara-penitra ny Vohémar. Tao Antalaha sy Andapa indray dia fanorenana lakozia ho an'ny hopitaly. Eto Sambava kosa dia hametrahana jiro manazava eny amin'ny fidirana amin'ny hopitalibe Besopaka. Somary mbola tara kosa ny fandraisana andraikitry ny vehivavy eo amin'ny sehatra politika, hoy ny Lehiben'ny Faritra vonjimaika Sabotsy Samuel satria Ben'ny Tanàna roa ihany no mba vehivavy amin'ireo Kaominina miisa 86 ato SAVA.
vendredi, 08 mars 2019 19:12
Ireo andro tsy iasana nefa andraisan-karama amin’ity taona 2019 ity
Ireo andro tsy iasana nefa andraisan-karama amin’ity taona 2019 ity.
Tany Ambatojoby ZAP Bemanevika no nahitana fa tsy maintsy mitondra kitay ny ankizy mpianatry ny EPP isaky ny Talata sy Zoma maraina. Samy amin'ny fitsinjirany avokoa izany, ka ny T2 mitondra kitay roa, ny T3 dia telo ary T4 dia efatra ary ny T5 mitondra kitay dimy isan’ankizy, ary isaky ny Talata sy ny Zoma io. Maro ny sekolim-panjakana any ambanivolo ahitana tranga toy izao hanampiana ny talen-tsekoly mba hanana fotoana hifantohana amin'ny fampianarana fa tsy ny kitay intsony no ho sakana, ary matetika natao ihany koa mba hanabeazana ny ankizy koa rehefa lehibe izy mba ho zatra manao asa aman-draharaha fa tsy ho kamo lahy na kamo vavy. (Jereo Sary Tohiny)